ညီအစ်အကို နှစ်ယောက်ရဲ့ ခြားနားချက် – Tameelay
ညီအစ်အကို နှစ်ယောက်ရဲ့ ခြားနားချက်
ဖြေ – “ ကျွန်တော် လူဆိုး ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိက တရားခံက ကျွန်တော့်အမေရဲ့ နောက်ယောက်ျား (ပထွေး) ကြောင့် ပေါ့ဗျာ။ ပထွေးက သူလုပ်ကျွေးရတာဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ကို နှိပ်စက်တယ် ၊ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ညစ်တဲ့ အတွက် အမေနဲ့ ပထွေးကို အရွဲ့တိုက်ပြီး အရက် သောက်တယ် ၊ ဖဲရိုက်တယ် ၊ ည ညတွေ အိမ် မှာ ပြန်မအိပ်ဘဲ လမ်းပေါ်မှာပဲ အချိန်ကုန် ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာတင် ကလေကခြေတွေနဲ့ ပေါင်းမိပြီး ဆေးခြောက်တွေ သုံးစွဲ ခဲ့ကြတယ်။ ခိုး၊ လု ၊ ခါးပိုက်နှိုက် ဒုစရိုက်မျိုးစုံကို ကျူးလွန်မိတော့ တာပဲဗျာ”
မေး – “ ခင်ဗျား မှာ အစ်ကို တစ်ယောက် ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ သူကရော ဒုစရိုက်သမားပဲလား “
ဖြေ – “ မဟုတ်ပါဘူး ၊ သူက အခြားမြို့မှာ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ လုပ်နေပါတယ်။”မှတ်တမ်းတင် အရာရှိလည်း စိတ်ဝင်စားသွားပြီး တက္ကသိုလ် ရှိရာသို့ လိုက်သွားကာ ပါမောက္ခကို အခုလို သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်း ခဲ့ပါသည်။
မေး – “ ဆရာခင်ဗျာ – အခုလို ပါမောက္ခ ဖြစ်သာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစား ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို လူငယ်တွေ စံနမူနာ ယူနိုင်ကြစေဖို့ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ် “
ဖြေ – “ ကျွန်တော် ခုလို ပါမောက္ခဖြစ်ရတာ ပထွေးကြောင့် ပါပဲ ခင်ဗျာ “
မေး – “ ပေထွေးက ဘယ်လို အားပေးကူညီခဲ့လို့လဲ “
ဖြေ – “ အားပေးကူညီတာ မဟုတ်ဘူးဗျ ၊ နှိပ်စက်တာ ၊ စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာ။ ကျွန်တော်ကလည်း အဲဒီလို လုပ်လေ စာကြည့်တိုက်သွားပြီး စာဖတ်လေပဲ။ တစ်ခါတလေ အိမ်မပြန်တော့ဘဲ စာကြည့်တိုက်မှုးကို ပြောပြီး စာကြည့်တိုက်မှာအိပ်တယ်။ စာကြည့်တိုက်မှူးကလည်း ကျွန်တော် နဲ့ သင့်မယ့် စာအုပ်တွေကို ရွေးပြီး ဖတ်စေတယ်။ စာအုပ်တွေထဲက နေ လောကဓံကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ဘယ်လို ရပ်တည်ရမယ်ဆိုတာ သိလာပြီးကြိုးစားလိုက်တာ ခုလိုတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဖြစ်လာတာပါပဲ ခင်ဗျာ “
သင်ခန်းစာ – ပထွေးဆိုး နဲ့ တွေ့တာခြင်း လောကဓံကို ခံရတာခြင်းတူသော်လည်း စိတ်ညစ်လို့ အရက်သောက်ပြီး အချိန်ဖြုန်းတဲ့ သူနဲ့ စာဖတ်ပြီး အချိန်ကို ကောင်းစွာ အသုံးချတဲ့သူ ဘယ်လောက်ကွာခြားလဲ ဆိုတာထင်ဟပ်ပြီး ၊ စာဖတ်ခြင်းဟာ ဘ၀ အတွက် ဘယ်လောက် အရေးပါလဲ ဆိုတာ သိသာထင်ရှားလှပါတယ်။
ညီအဈအကို နှဈယောကျရဲ့ ခွားနားခကျြ
ဖွေ – “ မဟုတျပါဘူး ၊ သူက အခွားမွို့မှာ တက်ကသိုလျ ပါမောက်ခ လုပျနပေါတယျ။”မှတျတမျးတငျ အရာရှိလညျး စိတျဝငျစားသှားပွီး တက်ကသိုလျ ရှိရာသို့ လိုကျသှားကာ ပါမောက်ခကို အခုလို သှားရောကျတှဆေုံ့ပွီး မေးမွနျး ခဲ့ပါသညျ။
သငျခနျးစာ – ပထှေးဆိုး နဲ့ တှတေ့ာခွငျး လောကဓံကို ခံရတာခွငျးတူသျောလညျး စိတျညဈလို့ အရကျသောကျပွီး အခြိနျဖွုနျးတဲ့ သူနဲ့ စာဖတျပွီး အခြိနျကို ကောငျးစှာ အသုံးခတြဲ့သူ ဘယျလောကျကှာခွားလဲ ဆိုတာထငျဟပျပွီး ၊ စာဖတျခွငျးဟာ ဘဝ အတှကျ ဘယျလောကျ အရေးပါလဲ ဆိုတာ သိသာထငျရှားလှပါတယျ။
အရေးကြုံလာရင် ကိုယ်တိုင်လည်းသုံး တပါးသူများကိုလည်း ကူညီပေးလို့ရတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆေးနည်းတိုများ
အရေးကြုံလာရင် ကိုယ်တိုင်လည်းသုံး တပါးသူများကိုလည်း ကူညီပေးလို့ရတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆေးနည်းတိုများ လက်တွေ့အသုံးချ ဆေးနည်းတိုများ (၃၈) ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရေနွေးကြမ်း အလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ ညအိပ်ရာမဝင်ခင် စာအုပ်ဖတ်ရင်း ရေနွေးကြမ်းသောက်လေ့ရှိတယ်။ ညဘက်အိပ်မပျော်ဘဲ ဆီး နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ် ထသွားရပါတယ်။ ညဘက်ဆီးသွားသူတွေ လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံရလေ့ရှိတယ်ဆိုတာ မှန်ပါသလား ဆရာ။ …
ကိုယ်အလေးချိန် ၀ိတ်လျှော့ချင်တာ ဒါမှမဟုတ် အခြားရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေမယ့် လှည့်ကွက်လေးတစ်ခုကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက် အောင်အောင်မြင်မြင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်အနည်းငယ်လောက်ကို ပြန်တွေးကြည့်တာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ …
ဘယ်လိုပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖြေက သုံးမျိုးပဲရှိတယ် တဲ့….
ဘယ်လိုပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖြေက သုံးမျိုးပဲရှိတယ် တဲ့…. လက်ခံလိုက်ပါ…. ဟုတ်ပါတယ် လက်ခံရမယ်… ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာ ကိုယ့်လက်ရှိအနေအထား ဒါတွေကို လက်ခံရမယ်…. ကံနဲ့ ကံရဲ့အကျိုးကို လက်ခံရမယ်…. ကိုယ်ဟာ အရာရာတိုင်းမှာ စူပါမဖြစ်ဘူးဆိုတာ လက်ခံရမယ်…. ရလဒ်တိုင်းအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးပေးဆပ်မှု ရှိရမယ်ဆိုတာ လက်ခံရမယ်…. အောင်မြင်မှုရှိသလို တခါတလေရှုံးနိမ့်ခြင်းနဲ့ ကြုံရတတ်တာကို …